Mahadum Ege ga - akpọ ndị ọrụ mkpọrọ ikpe mbụ RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMahadum nke Ege ga-akpọghachi ndị ọrụ ikpe amamịghe
10 / 12 / 2019 Ọrụ, General
Mahadum Ege ga-eme onye bụbu ọkà mmụta gbasara ọrụ iwu
Mahadum Ege ga - akpọta ndị ọrụ ikpe amamịghe na mbụ; Mahadum Ege ewepụtala ọkwa ọhụrụ nke ndị ọrụ site na DPB. Dabere na nkwupụta ọkwa ahụ, Mahadum Ege ga-eme ndị ọrụ mkpesa 10-16 n'ọrụ XumpX na 2019-12 site na throughKUR! A ga-eme ntinye akwụkwọ maka ntanetị n'ịntanetị site na weebụsaịtị İŞKUR.
Total ịzụrụ mere na 12 ọrụ ga-ịkpọsa Ege University n'etiti December 10 16-2019 ụbọchị nke ngwa ka Turkey via ukara na website nke Employment Agency mara ọkwa.
Aegean Mpempe akwụkwọ ọkwa nke Mahadum bipụtara bụ dị ka ndị a; N'ime ogo nke Iwu Iwu Mba. 4857 na ngalaba ọrụ nke nzukọ dị n'etiti Mahadum Ege na ụkpụrụ nke usoro a ga-esi tinye n'ọrụ n'ọrụ mkpesa ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ọha na otu, yana usoro na ụkpụrụ a ga-etinye n'ọrụ maka iweghachite ndị ahụ a mara ikpe mbụ ma ọ bụ ndị merụrụ ahụ na ọgụ megide iyi ọha egwu dịka ndị ọrụ ọha. Na ọrụ nke nhicha ọrụ 12 iberibe ga-eweghachite ndị ọrụ na-adịgide adịgide.
Na-adịgide adịgide ọrụ cadres na okwu nke akwụkwọ a ga-bipụtara na website nke General Directorate of Turkey Business Council. Ndị anamachọ ihe na-emezu ihe achọrọ nwere ike itinye akwụkwọ anamachọihe ha n'etiti Disemba 10-16 Disemba site na servicelọ ọrụ nlekọta ọrụ İŞKUR ma ọ bụ : www.iskur.gov.tr Adreesị ịntanetị.
TÜLOMSAŞ ga-eme ndị na - arụ ọrụ na mbụ
Ministri nke Egbọ njem ndị tozuru oke na ndị nwere nnabata
TCDD High School Graduate ga-eme ka ndị omekome na-ahụ maka ndị omekome gafee
Ọrụ: TCDD Yozgat 2. Ch. Nhọkọ
Ọrụ: TCDD Sivas 4. Ch. Dir. 415. Ụzọ nyochaa okporo ụzọ
Ọrụ: TCDD Izmir 3. Ch. Dir. Ex-Na-ekwu na ị ga-achọ ịchọta ọrụ
Ọrụ: TCDD Sivas 4. Ch. Dir. Ex-Na-ekwu na ị ga-achọ ịchọta ọrụ
Job: ọgwụ opium TCDD Old ịma Ọrụ Buy-eduba ná
Ọrụ: TCDD Alasehir 352. Inyeghachi ndị ikpe mara ikpe
Nkwuputa TÜDEMSAŞ nke Ex-Convicts
Ọrụ: TÜLOMSAŞ A.Ş. Onye na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide na-enweta 2015
Job: TCDD Kırıkkale Ex-Kwupụta Nwunye Mgbasa Ozi
Nta akwukwo nke Mahadum Ege nke ndi oru ndi emere ka ha buru agha